बाटोको एउटा खाल्डो ले गर्ने हानी | Hamro Patro
नेपालमा इन्धन अरु देशवाट ल्याउने हो, खाल्डाहरुले गर्दा लगभग दोव्बबर नै इन्धन खपत बढि गराँउदछन् । गाडीहरु बिग्रने क्रम पनि त्यस्तै हो अनि गाडीका पाटपूर्जा लगायत इन्धनको पनि धेरै पैसा बिदेशिनुमा पनि खाल्डाहरुलाई दोष दिन सकिन्छ । अब हिँउदमा धुलोको अनि बर्खामा हिलो र पानीको भण्डार अनि प्रक्षेपण पनि खाल्डाहरु ले नै गर्ने जिम्मा पाएका छन् । खाल्डामा परेर बालबालिका बगेका, सवारी साधन डुबेका अनि बगेका कुरा त नेपालमा नदेख्ने को होला र ?
देश चुनावको रन्कोमा छ, बिकास अनि समृद्धिका नाराहरु सस्ता भएका छन् । गाँउमा भोट किन्ने, बेच्ने, चपाउने अनि पचाउने लर्को चलेको छ, शहर शहरमा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमवाट चुनावी दोहोरी अबिश्राम चलिरहेको छ । प्रसंग जोडछौं बिकासको अनि अहिले भर्खर हामी हिँडेर आएको बाटो या गुडेर आएको बाटोको केही पाइला याद दिलाउन चाहन्छौं ।
बाटो र खाल्डामा खासै फरक छैन, यहाँ खाल्डोमा बाटो छ या बाटोमा खाल्डो छ थाहा हुँदैन । बादलका मुस्लाहरु बिच जेट बिमान उडेका बेला झ्यालबाट चकमन्न देखिने सेता बादलजस्ता धुलोका बादल घुम्टोबाट हामी हरेक दिन यात्रा गर्दछौं । यस्तै यात्राहरु ले जन्माएको एउटा नियात्रा आज प्रस्तुत छ, एउटा खाल्डो ले गर्ने हानी ।
म एउटा प्रतिनीधी खाल्डोको हानी प्रस्तुत गर्न जाँदैछु, यस्ता लाखौं हजारौं खाल्डाहरु हामीले पार गर्दै आएका छौं । एक्सीलेटरले थोरै साँस फेर्न पाएको हुँदैन, गियर बढाएर स्पीडलाई सम्मानजनक बनाउन पाएको पनि हुँदैन्, टुप्लुक्क एउटा खाल्डो आइपुग्दछ । आगन्तुक पनि हैन खाल्डो, हरेक मोडमा भेटिन्छन यि खाल्डाहरु । यात्रा असुरक्षित बनाउनको मुख्य श्रेय यिनै खाल्डाहरु लाई जाँदछ । घच्याक घच्याक खाल्डाहरुले गाडी अनि यात्री सबैजनालाई पालैपिच्छे याद दिलाँउदछन्, सावधान यो नेपालको बाटो हो भनेर । सलल बग्ने बाटो बनेको महिनादिन पनि पुगेको हुँदैन, नेपालीहरुको खाल्डो मोहले बाटालाई खाल्डोको गहनाले सिगांरिदिन्छन् । कहिले मेलम्ची गहना त कहिले बाटो बिस्तार गर्ने बहानाको गहना, बाटाहरुले रुप पाँउदछन अनि शिघ्रानुशिघ्र कुरुप पनि बनाइन्छ । यदि केही समय बाटो टिकिहाल्यो भने पनि ठेकदारको सस्तो बेसाहा अर्थात सस्तो कार्यले बाटोलाई छेरपाटी लाग्दछ । एउटा बर्खा नसहेको बाटोका कालापत्रहरु पानीले बगाएर सुलुलु लिएर जान्छन्, फेरि उदांगो हुन्छन्, खाल्डाहरु ।
नेपालमा गाडीहरु धेरै टिक्दैनन्, मेन्टीनेन्समा धेरै खर्च लाग्छ, मुख्य कारणमा पर्दछन यहि खाल्डो । गाडीमा यात्रा गर्ने यात्रीहरुको स्वास्थलाई खाल्डाले निर्ममता पूर्वक खेलवाड गरिदिन्छ, धुलो अनि धुँवाका मुस्ला पनि खाल्डावाटै उड्ने त हुन् । केही धनीमनीहरु गाडीका सिसा लगाएर खाल्डाका धुलोवाट त बच्दछन तर चक्काले खाल्डोको स्पर्श पाएसंगै उफ्रिने गाडी अनि त्यसको धक्का त सिसाले जोगाउन सक्ने कहाँ हुन्छ र ?
खाल्डो यत्र तत्र सर्वत्र छ अनि यसको महिमा हरेक बाटा, साधन र यात्रीले भोगेका छन् । यहाँ देख्नेले धुलो अनि यस्ले फोक्सोमा गर्ने असरमात्र देखेका छन्, एकदिन आँउछ जब खाल्डोको चौतर्फि प्रभावले गर्दा आँखामा बिभिन्न समस्या अनि बिन्दुहरु भएर एउटा पुस्ताले दुख्ख पाँउदछ । फोक्सो, श्वासप्रश्वास, दम, खोकी त प्रथम पुरस्कार मात्र हुन् है दोश्रो तेश्रो लगायत सान्तवना पुरस्कारका श्रेणीहरु पनि भयानक छन् ।
सरकार नभएको देश भन्ने हो भने यहाँ बर्षेनी सरकार अनि सभा परिवर्तन हुन्छ तर खाल्डोमोह ले संसद भवन कहिले छाडेन् । यो चुनावमा आउने नेतृत्वले केही नगरेपनि बाटाका यि खाल्डाहरु पुरिदेलान भन्ने सानो अपेक्षा भने सबैको छ ।
हिसाब नै गर्ने हो भने पनि खाल्डाहरु बाटामा नहुने बित्तिकै यहाँ गाडीको बिग्रने दर, ईन्धनको बचत, यात्रीको स्वास्थ, दुर्घटनाको दर अनि समयमा कार्यलय या गन्तव्य पुग्ने यात्रीहरुको समयको मुल्यको व्यापक बचत हुने देखिन्छ । देशलाई स्वीजरल्यान्ड बनाउछु भन्दै सिंगापुरको सपना देखाउने नेतृत्वहरुले घरै अगाडीको बाटो पुर्न नसकेपछि अबको चुनावमा मतदाताहरु ले चनाखो भएर नेतृत्व छान्न जरुरी देखिन्छ । गाडीमा बस्दा या मोटरसाइकल कुदाँउदा पनि सलल हिँडेको अनुभव होस् न, नेपालको बाटो देख्दा र हिँड्दा गर्व अनुभव होस् ।
खाल्डाहरु हराओस् ।